December 2013 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Maung Pauk at 8:27:00 PM 0
Y511 固件(Y511-U00,Android 4.2,V100R001C00B165,中国联通) Firmware
Ye Naing at 3:13:00 PM 1
Y511 Firmware လေးပါ။ ဒီဖုန်းလေးက ဘယ်လိုပြောရမလဲ....ပဲများသားဗျ။ ၀င်လာတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီး အပြင်ပုံတူပေမယ့် အပျော့ထည်ပိုင်းမှာ
ကွာခြားချက်လေးတွေနဲ့ ....။ ခုမလိုသေးရင်တောင် ဆောင်ထားဖို့ကောင်းပါတယ်...။
မူရင်း Huawei Link အတိုင်းတင်ထားပါတယ်။ ( ကိုယ်တိုင် upload လည်း တင်မှ မရတာ...။)
( စာမျက်နှာရဲ့ ညာဘက်ချမ်း အလယ်လောက်မှာ 2013-11-25 ... V100R001C00B165 ဆိုတဲ့
အောက်မှာ Download Button ပါ။ ) 7zip ဖိုင်ပါ။
Download Link : http://consumer.huawei.com/cn/support/downloads/detail/index.htm?id=17967
Unknown at 2:29:00 PM 0
GlarySoft Glary ကကွန်ပြုတာရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်ကာကွယ်နိုင်တဲ့ tweaks နဲ့ utilities တို့စုစည်းထားတာပါ။မလိုအပ်တဲ့ဖိုင်၊ registry အဝင်အထွက်နှင့်အင်တာနက် history တို့ကိုရှင်းလင်းနိုင်ပါတယ်၊Browser ရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းကိုတိုးချဲ့ခြင်း၊ disk space အသုံးကိုပိုင်းခြားခြင်းနှင့် (duplicate) ထပ်နေတဲ့ဖိုင်များကိုရှာဖွေပြီး စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်၊ပျက်ဆီးနေတဲ့ window shortcut ကိုရှာဖွေ၊ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး ဒီဆော့လ်ဝဲမှာပါတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အပြည့်အစုံနှင့်
Unknown at 2:07:00 PM 0
PC မှာဗိုက်ဗာ အသုံးပြုကြတဲ့ အကိုများအတွက် နောက်ထက် ထွက်ရှိလာတဲ့ ဗိုက်ဗာ
ဆော့ဝဲလေးပါ အသုံးပြုရတာ ယခင်ကထက် ပိုမိုက်ပါတယ် Sticker လေးတွေ တော်တော် အစုံအလင်
ပါတယ်ဗျ (၁၇) မျိုးတောင် အသုံးပြုခွင့်ပေးထားတယ် မြန်မာစာလည်း ယခင်ကလို ရေးရင် အတုံးလေးတွေ မပေါ်တော့ဘူး မြန်မာစာကို အမှန်မြင်ပြီး ရေးနိုင်ပါပြီး နောက်ထက် ပိုထူးခြားတာက
Christmat နီးလာလို့လားမသိဘူးဗျ Viber background ကလည်း Christmat wallpaper လေးနဲ့ဗျ
ဘေးမှားလည်း Christmat ဘိုးဘိုး ပုံလေးပါ ထဲပေးထားတယ် အောက်ကပုံလေးကိုကြည့်လိုက်
တစ်ချို့ စာတွေမှာတော့ မြန်မာစာကို အကုန်မမြင်ရသေးဘူးဗျ ကျွန်တော်လည်း စမ်းကြည့်နေတုန်း
ရတဲ့နေရာမှာလည်း ရတယ် ကျွန်တော်ဖုန်းဖောင့်တွေ ထဲ့စမ်းကြည့်နေတာ အဆင်ပြေသလိုလိုတော့
ရှိလာတယ် ပိုကောင်းလာရင်တော့ ပြေားပြပေးပါမယ် အောက်ကပုံလေးကို ကြည့်လိုက် တော်တော်စုံစုံ
Ye Naing at 11:27:00 AM 0
Kingo Android Root.exe ...One click root tool တစ်ခုပါခင်ဗျာ...။
တိုက်ရိုက်လင့် မူရင်း Page အတိုင်းတင်ထားပါတယ်....( Green Button Download )
Download က IDM resume ရပါတယ်....( 22.26MB )
Root လုပ်နိုင်တဲ့ Devices တွေကိုတော့ Devices ဒီနေရာလေးမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Unknown at 6:12:00 AM 4
ဒီနည်းပညာလေးကတော့ သိပြီးသူလည်း ရှိကြသလို မသိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း ရှိလိမ့်မယ်
ထင်လို့ ကျွန်တော်ရေးပေးတာပါ ကျွန်တော်ထက် ညံ့တဲ့သူ မရှိဘူးဆိုတာ သိပြီးသားပါ ဒါပေမယ့်
မသိတဲ့သူအတွက်ပေါ့နော် သိတဲ့သူ ကျော်သွားပေးပါနော် ဘားလည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာမှာ မျက်နှာပြင်ကို ဓတ်ပုံရိုတ်တဲ့ နည်းလမ်းလေးပေါ့နော် အရင်တုန်းကတော့ လက်တော့
အသုံးပြုတော့ လက်တော့မှာ ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ကို ဆော့ဝဲမလိုပဲ ရိုတ်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေ
တွေ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် Dasktop လည်းသုံးတော့ မလုပ်တတ်တော့ဘူး ကြွားတာဟုတ်ဘူးနော်
ဟိဟိ ကြုံတုန်းလေးမလို့ ပြေားပြတာ လက်တော့မှာ ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ကို ဓတ်ပုံရိုတ်ချင်ရင်တော့
ကီးဘုတ်မှ Ctrl + prt sc sysrq ဆိုတဲ့ ကီးခလုပ်နှစ်ခုကို စုံတွဲပြီးနှိပ်ရိုတ်ရတာပါ Dasktop မှာကြတော့
Ctrl+ screen ဆိုတာကို တွဲပြီးနှိပ်ရပါတယ် ပြီးရင်တော့ start ကိုကလစ်ပြီးတော့ paint ဆော့ဝဲလေးကို
ရှာပြီးတော့ ဖွင့်လိုက်ပါ ထိုအထဲမှာ ကလစ်တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ Ctrl + V ကိုတွဲနှိပ်လိုက်ပါ
ရိုတ်လိုက်တဲ့ ပုံလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ကြိုက်တဲ့ ဒဇိုင်းကိုဖန်တီပေတော့
Unknown at 12:09:00 AM 0
ကွန်ပျူတာမှာ အလွယ်ဆုံးအချိန်ပေးပြီး ပိတ်နည်းလေးပြေားပြပါမယ် သိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်
တောင်းပန်ပါတယ်နော် မသိတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ် ကျန်တော်လည်း အွန်လိုင်းမကောင်းလို့ ဆော့ဝဲလေးတွေ မတင်နိုင်လို့ နည်းလမ်းလေးတွေပဲ တင်ပေးနေရတာပါ
ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ ကွန်ပျူတာမှာ အလုပ်လုပ်ထားပြီး တခြားအလုပ်နဲ့ သွားစရာရှိတဲ့အ
ခါမျိူးတွေမှာ အသုံးဝင်ပါတယ် အလုပ်ပြီးလောက်မည့် အချိန်အတိုင်းအတာကို မှန်းဆပြီးတော့
အချိန်သတ်မှတ်ပေးထားပြီး ပိတ်ထားခဲ့နိုင်ပါတယ် အချိန်သတ်မှတ်ပြီးတော့
W+L လေးကိုတွဲနှိပ်ပြီးလော့ချထားခဲ့ရင် ဘာမှပှုစရာမလိုဘုး အချိန်ပြည့်ရင် ပိတ်သွားလိမ့်မယ် နည်းလမ်းလေးက ကွန်ပျူတာကီးဘုတ်ကနေ RUN box လေးကို window + R ကိုတွဲနှိပ်ပြီး ခေါ်လိုက်ပါ ကွက်လပ်လေးထဲမှာ cmd.exe လို့ရိုတ်ထဲ့ပေးလိုက်ပါ အပေါ်ကလို ပုံလေးပေါ်လာရင်တော shutdown _s -t 1500 ကိုပိတ်ချင်တဲ့အချိန်ကို ရေးပေါ့ ၁၅၀၀ ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ အချိန်ပြည့်ရင်တော့ပိတ်သွားမှာပါ
Unknown at 1:56:00 PM 2
ကွန်ပျုတာရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်နိုင်တဲ့ tools ပေါင်း ၂၀ ကျော်ပါဝင်တဲ့ system tweaking suite ဖြစ်ပါတယ်၊NTFS and FAT volumes မှာမှားဖျက်မိတဲ့ဖိုင်တွေကိုပြန်ဖေါ်နိုင်ပါတယ်၊ စက်မြန်ဆန်အောင်မလိုအပ်တဲ့ဖိုင်တွေကိုရှင်းလင်းပေးပါတယ်၊Registry ကိုစစ်ဆေးပြီး အမှားများတွေ့ရင်လည်းဖြေရှင်းပေးပါတယ်၊Windows executable file ကိုလည်းလုံခြုံတဲ့ password နဲ့ကာကွယ်ပေးပါတယ်၊Memory နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿ နာကိုဖြေရှင်းဖို့ စက်ထဲက တူနေတဲ့(duplicate) ဖိုင်တွေကိုရှင်းပြီး optimize လုပ်ပေးပါတယ်၊စက်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ processes နှင့်ထည့်သွင်းထားတဲ့
ဆော့လ်ဝဲများကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်၊hardware and software ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုလည်း
ဖေါ်ပြပေးရုံသာမက Windows Registry ကိုလည်း Back up နဲ့ restore ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။Log off, stand by, hibernate, သို့မဟုတ် စက်ပိတ်မည့်အချိန်ကိုသတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်၊Windows Settings ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ဒီဆော့လ်ဝဲရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအပြည့်အစုံကိုအောက်မှာဖတ်နိုင်ပါတယ်၊
Unknown at 5:27:00 PM 0
SpeedUpMyPC ဆိုတဲ့အတိုင်း စက်တစ်ခုလုံးကို တည့်ငြိမ်ပြီး မြန်ဆန်အောင် optimize လုပ်ပြီး ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။Memory ပြဿ နာကို မလိုအပ်တဲ့ဖိုင်များကိုဖျက်ပေးပြီး အင်တာနက်မြန်ဆန်အောင်လည်း လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်၊Startup programs များရဲ့အရှိန်ကိုမြှင့်တင်ပေးပြီး System ကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါတယ်၊ကွန်ပြုတာထဲက Resources အားလုံးကိုအလွယ်တကူ ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်၊
ဒီဆော့လ်ဝဲကို Windows XP, Vista, 7, 8 တင်ထားတဲ့စက်မှာအသုံးပြုနိုင်ပြီး
Unknown at 8:39:00 PM 0
Revo Uninstaller ကသူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ကွန်ပြုတာမှာ မလိုအပ်တဲ့ဆော့လ်ဝဲတွေကို unistall လုပ်ပေးပါတယ်၊တစ်ချို့ဆော့လ်ဝဲတွေကို ဖျက်ရာမှာကွန်ပြုတာမှာပြဿ နာတတ်ပြီး သူတို့ကို Control Panel "Windows Add or Remove Programs” ကနေဖျက်လို့မရပါဘူး၊ ဒီဆော့လ်ဝဲက "Windows Add or Remove Programs" applets ထက်ကိုအရမ်းမြန်ပြီး အစွမ်းပိုထက်ပါတယ်၊
ဒီဆော့လ်ဝဲကဖျက်ပြီးရင်လည်း ဖျက်လိုက်တဲ့ဆော့လ်ဝဲရဲ့ဖိုင်တွေကျန်ရှိသေးလားဆိုတာကို အဆင့်မြင့်ပြီး မြန်ဆန်တဲ့စနစ်ကိုသုံးပြီးတော့ စစ်ဆေးပေးပါတယ်၊ပြီးတာ့ ဆော့လ်ဝဲရဲ့
အချက်အလက်များကို မဖျက်ခင်(uninstall) နဲ့ (Scan) မစစ်ဆေးတုန်းမှာ စီစစ်ပေးပါတယ်၊
ကွန်ပြုတာမှာကျန်ရှိပြီး မလိုအပ်တဲ့ files, folders, registry keys ကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးပါတယ်၊
Changes in 3.0.8:
BLOG Blog Templates Templates
Maxxiz - Responsive Magazine/News Blogger Template v1.20 ( Premium ) Free Download
Maung Pauk at 6:49:00 PM 7
ဒီကောင်ကတော့ ခု ကျွန်တော် သုံးထားတဲ့ Template ဖြစ်ပါတယ်.. Premium ဖြစ်ပြီး ဒေါ်လာ 20 တောင် ကျသင့်ပါတယ်.. ဝယ်ချင်ရင်တော့ ဒီမှာ ဝယ်နိုင်ပါတယ်.. မဝယ်ချင်ရင်လည်း အောက်ဆုံးကလင့်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်.. မဝယ်ခင် Demo လေး တစ်ချက်တော့ နှိပ်ကြည့်ပါအုံး.. Template မလဲ တတ်ရင် ဒီမှာ ကြည့်ပါ..
Maxxiz – Responsive Blogger Template Maxxiz isablogger/blogspot template with responsive layout. Its High User Friendly Blogger Template. Its design simple and clean and perfect for magazine or portofolio websites. With an attractive color combination and impressed professionals and has many features.
Maxxiz Blogger Template Features :
Purchase : Here ! Only $20
Syahira – Responsive Blogger Template ( Premium ) Free Download
Maung Pauk at 6:17:00 PM 0
Syahira – Responsive Blogger Template က တော်တော်လှတယ်ဗျ.. ဘလော့အတွက်ဖြစ်ပြီး အခပေးရတဲ့ Template ဖြစ်ပါတယ်.. ဒေါ်လာ ၂၀ တန်ပါတယ်.. ဝယ်ချင်ရင် ဒီမှာ ဝယ်နိုင်ပါတယ်..
မဝယ်ချင်ရင်တော့ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်.. မဒေါင်းခင် Demo ကိုကြည့်လို့ရအောင် အောက်မှာ လင့်ပေးထားတယ်..
Template အစားမထိုးတတ်ရင် ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်..
Syahira – Responsive Blogger Template Syahira isablogger/blogspot theme with responsive layout. Its High User Friendly Blogger Template. Its design simple and clean and perfect for magazine or portofolio websites. With an attractive color combination and impressed professionals and has many features.
Syahira Blogger Template Features :
Purchase : Here ! $20